Metezo ny fahalalana sarimihetsika - Great Silver Pack (ShenZhen) Co., Ltd.
Ny POF dia karazana horonantsary mampihena hafanana, ampiasaina amin'ny vokatra fonosana amin'ny endriny mahazatra sy tsy ara-dalàna. Noho ny fiarovana tsy misy poizina sy tontolo iainana, mangarahara avo, fihenam-bidy avo, fitomboan'ny hafanana, gloss avo, henjana, fanoherana ny ranomaso, manana ny mampiavaka ny fihenan'ny hafanana mitovy izy ary mety amin'ny fonosana haingam-pandeha haingana. Izy io dia vokatra azo soloina amin'ny horonantsary nentim-paharazana hafanana PVC. Ampiasaina be amin'ny famatsiana fiara, vokatra plastika, fitaovana, boky, elektronika, board circuit, MP3, VCD, asa-tanana, sary sy vokatra hazo hafa, Kilalao, fanafody famonoana bibikely, kojakoja ilaina isan'andro, sakafo, kosmetika, zava-pisotro am-bifotsy, vokatra vita amin'ny ronono, fanafody, kasety ary kasety horonantsary ary vokatra hafa.
1. Miaraka amin'ny mangarahara avo sy gloss tsara, dia afaka mampiseho mazava ny fisehon'ny vokatra, manatsara ny fahatsiarovan-tena amin'ny fahatsapana ary maneho taratra avo lenta.
5. Sariaka amin'ny tontolo iainana, tsy misy poizina, mifanaraka amin'ny fenitra US FDA sy USDA, ary afaka manangona sakafo.
Ny akora tena ilaina amin'ny sarimihetsika fonosana hafanana miisa dimy sosona dia misy LLDPE (polyethylene ambany ambany), TPP (polypropylene copolymer ternary), PPC (polypropylene copolymer binary) ary ireo additives ilaina toy ny slip agents, Anti-blocks agents, agents antistatic, sns. Ireo akora fototra ireo dia fitaovana azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana ary tsy misy poizina, tsy misy gazy poizina na fofona vokarina mandritra ny fanodinana sy ny fampiharana ny vokatra, ary ny fahombiazan'ny fahadiovan'ny vokatra dia mifanaraka amin'ny fenitra US FDA sy USDA, ary azo ampiasaina manangona fonosana sakafo.
Ny horonantsary fonosana hafanana mihena dimy sosona dia vita tamin'ny polyethylene ambany-density (LLDPE) sy polyolyloly copolymer (TPP, PPC) ho toy ny akora fototra, manampy fanampiny ilaina, ary novolavolaina tamin'ny famolavolana co-extrusion blow. Ny fizotrany Tsy mitovy amin'ny fizotran'ny famolavolana nentim-paharazana, noho ny toetra mahamenatra ao amin'ny fanjakana melts PP, dia tsy azo ampiasaina ny fizotran'ny fikolokoloana nentim-paharazana. Fa kosa, ny fizotran'ny bubble indroa dia ampiasaina, izay antsoina koa hoe dingana Pulandi eto amin'izao tontolo izao. Ny vokatra dia atsonika ary alaina any ivelan'ny masinina, amin'ny alàlan'ny die co-extrusion natao manokana, natsangana ny horonantsary voalohany ary novonoina ary avy eo nohafanaina ho an'ny fiakaran'ny vidim-piainana faharoa sy ny fanitarana mba hanaovana ilay vokatra.
Ny horonantsary mampihena hafanana miampy dimy sosona dia azo novokarina tamin'ny famaritana isan-karazany arak'ilay fampiharana. Ny hatevin'ny ankapobeny dia manomboka amin'ny 12μm ka hatramin'ny 30μm. Ny hatevin'ny mahazatra dia 12μm, 15μm, 19μm, 25μm, sns. Ny fatra famaritana dia miankina amin'ny habetsaky ny fonosana.
fanoherana mangatsiaka: Ny horonantsary fonosana hafanana hafanana miisa dimy sosona dia mijanona malefaka amin'ny -50 ° C tsy misy fahamendrehana, ary mety amin'ny fitehirizana sy fitaterana ireo entana fonosana ao anaty tontolo mangatsiaka.
Fampisehoana fahadiovana: Ireo akora ampiasaina amin'ny horonantsary fonosana hafanana mihena dimy sosona dia fitaovana tsy misy poizina avokoa ny tontolo iainana, ary ny fanodinana sy ny fampiasana dia madio ara-pahasalamana sy tsy misy poizina, mifanaraka amin'ny fenitry ny firenena FDA sy USDA, ary afaka ampiasaina amin'ny fonosana sakafo.
Ny sarimihetsika fonosana hafanana POF dia manana fampiasa betsaka, tsena malalaka ary manana tombony amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny tsy fanapoizinana. Noho izany, ny firenena mandroso manerantany dia manome lanja azy betsaka. Izy io dia nanolo ny sarimihetsika famonosana hafanana hafanana PVC ho vokatra lehibe amin'ny akora famonosana hafanana. Ny famokarana ireo andiana vokatra eto amin'ny fireneko dia nanomboka tamin'ny tapaky ny taona 1990. Amin'izao fotoana izao dia misy mihoatra ny folo ny tsipika famokarana any Shina, izay fitaovana ampitaina avokoa, miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra manodidina ny 20 000 taonina.
Noho ny elanelana misy eo amin'ny teknolojia famonosanan'ny fireneko sy ireo firenena mandroso iraisam-pirenena, ny fampiharana ny andian-tsarimihetsika fonosana miisa telo sosona hafanana ao Shina dia mbola eo am-piandohana ihany, ary mbola tery ihany ny habaka fampiharana, voafetra amin'ny zava-pisotro, vokatra audio-visual, sakafo mahafa-po ary vokatra simika isan'andro isan'andro amin'ny faritra vitsivitsy, manodidina ny 2 ka hatramin'ny 50.000 ka hatramin'ny 30.000 taonina ny tinady isan-taona. Ny sarimihetsika hafanana mihena amin'ny hafanana PVC dia mitana tsena famonosana hafanana be dia be ihany koa, miaraka amin'ny mety ho fampandrosoana lehibe. Miaraka amin'ny fidiran'ny fireneko amin'ny WTO sy ny fampidirana azy amin'ny tsena iraisampirenena, ny fitomboana miandalana amin'ny fitakiana fonosana ho an'ny entana marobe fanondranana, ary ny fampandrosoana haingana ireo tranombarotra lehibe eto an-toerana, ny fampiharana ilay sarimihetsika fonosana hafanana miisa telo sosona voafaoka hitombo haingana. Azo heverina fa ny sosona telo Ny vinavinan'ny tsena horonantsary mampihena hafanana miovaova dia tena malalaka.
Mihena horonan-tsary horonan-tsary, Famonosana Polyolefin Pof Shrink, Mitete Film Pvc, Temperature famonosana polyolefin, Sarimihetsika Polyolefin Pof Shrink, Horonan-tsarimihetsika Vs Shrink Wrap,